Izindlela Ezi-13 Zokukhomba Ukukhangisa Kwakho Kokubonisa | Martech Zone
NgoLwesihlanu, Septhemba 18, 2015 NgoMgqibelo, Januwari 14, 2017 Douglas Karr
Ukukhangisa kokubonisa kuyaqhubeka nokuthuthuka njengoba sike saxoxa ngaphambili kwinhlolokhono yethu maqondana Ukukhangisa kohlelo noPete Kluge we-Adobe. Uma ucabanga ukukhulisa ukukhushulwa kwakho kube ukukhangisa okuboniswayo, kunezindlela ezimbalwa zokukhomba okuvelayo kokukhangisa ukuzama ukuthwebula izethameli ezifanele kakhulu, amanani aphezulu wokuchofoza, kanye nokuguqulwa okuthuthukisiwe:
Ukuqondiswa komkhiqizo - ngokuhlola okuqukethwe ekhasini nokuhlonza amagama omkhiqizo noma wemikhiqizo, ungaqala izikhangiso ezisuselwa kubavakashi abafuna imikhiqizo yakho noma imikhiqizo yabancintisana nabo.
Isiteshi Ukuqondisa - bonisa amanethiwekhi wokukhangisa anikezela ngemigudu eyakhelwe ngaphakathi ehlakaniphile yokufaka izingosi ezinentshisekelo ehlukile. Izindaba, ezemidlalo, ukudla, ukuzijabulisa, njll.
Ukuqondiswa kwedivayisi - Ukukhangisa kungabhekiswa kuzinhlobo zeselula, ithebhulethi nezinhlobo ezihlukile zokubonisa.
Ukuqondiswa kwabantu - ubudala, ubulili, ubuhlanga, ingcebo, isihloko, nolunye ulwazi lwabantu.
Targeting Geographic - Izwe, izwe, isifunda, idolobha, umakhelwane, ikhodi yeposi, imingcele ye-latitude nobude noma irediyasi.
Ukuqondiswa kwegama elingukhiye - amanethiwekhi wesikhangiso akhombisa ukuba ngcono kakhulu ekuhloleni okuqukethwe ekhasini nokubonisa izikhangiso ezifanele ezisuselwa kumagama angukhiye akhethwe ngumkhangisi.
Ukuqondiswa kwenzalo - kususelwa ekuziphatheni kokuphequlula kwesivakashi, umlando wokuthenga kanye nokubaluleka kwesayithi, izikhangiso zingabhekiswa inzalo efana nemidlalo, ukupheka, ezombusazwe, njll.
Ukuqondiswa kwe-In-Market - Izikhangiso zokubonisa zesikhathi sangempela kuzipesheli noma kumikhiqizo ehlobene lapho isivakashi sisesizeni sakho sicwaninga noma sithenga.
Ibuyisela emuva - lapho isivakashi sifika kusayithi lakho bese sihamba, inethiwekhi yesikhangiso inekhukhi lomuntu wesithathu ebavumela ukuthi bababone kwamanye amasayithi lapho banganikezwa khona ithuba lokubuya.
Sesha Ukuhlela kabusha - lapho isivakashi siseshela, sifika kusayithi lakho bese sihamba, inethiwekhi yesikhangiso senjini yokusesha ine-cookie yomuntu wesithathu evumela ukuthi ibabone kokunye ukuseshwa lapho banganikezwa khona ukubuyiselwa.
Ukuqondiswa Kwesiza - kunezinkampani eziningi zobuchwepheshe bokumaketha ezifisa ukufinyelela izilaleli zethu, ngakho-ke sinenethiwekhi yethu yokubonisa kanye ne-portal yokuzenzela lapho abakhangisi bangathenga khona okuvelayo kwesikhangiso ngqo.
Ukuqondiswa Kwesikhathi - Isikhathi sosuku, ukuhlukaniswa kosuku, noma imicimbi esuselwa esikhathini ngemuva kokuthi isivakashi sakho sithathe isenzo esizeni sakho.
Ukuqondiswa Kwegrafu Yomphakathi - ukuthandwa, ithonya, ukuhambisana, nokulandela.
Amasistimu amasha abikezela ngisho nethuba lokuthi isivakashi sichofoze ngokuya ngesilinganiso sesikhathi sangempela sesivakashi esifika sikhombise isikhangiso esifanele. Khumbula ukuthi, noma ngabe unemibuzo eyisisekelo, abathengisi bangakha izimo ezibhekiswe kakhulu ngokususelwa enhlanganisweni yamakhono ahlukile wokukhangisa okubonisa. Akuwona wonke amanethiwekhi wokukhangisa abonisa zonke izinhlobo, ngakho-ke qiniseka ukuthi uhlola inethiwekhi yesikhangiso.
Buka kusuka ku- MediaMath.
Tags: inethiwekhi yesikhangisoukukhangisa isikhangisobonisa inethiwekhi yesikhangisobonisa ukukhomba kwesikhangiso
Kuyini ukubhida kwesikhathi sangempela (i-RTB)?
Okthoba 13, 2015 ngo-10: 02 AM
Njengamanje singena ezikhangisweni zokubonisa kepha sesiqale ukwakha ithani lezinhlu zokumaketha kabusha. Umkhankaso wethu wokugcina uphumelele.
Okthoba 19, 2015 ngo-9: 17 AM
Ukuhlela kabusha kungenye yezindlela zami zokukhangisa zokubonisa engizithandayo. Iqiniso lokuthi sebevele bazi ngomkhiqizo wakho kuyinzuzo enkulu kuwe nakwamadola akho wokukhangisa.
I-Oct 19, i-2015 ku-12: i-34 PM
Ngizwile lokho kubakhangisi abaningi, uSteven!